Ny mahavariana ny biby mandady biby - nahoana isika no tia dinôzôra lehibe toy izany
Fikarakarana sy fandaniana ho an'ny biby an-tsokosoko
Tahaka izany dia tandindona tanteraka ary ny alika na saka mahazatra dia tanteraka tanteraka. Ankehitriny ao amin'ny tokantrano alemà dia maro kokoa ny biby mandady ary ny zanatsika izao no maniry ny sokatra, ny gecko na ny tarantula.
Ny hafetsen-dratsinay dia ny hampihorohoro ny lohanay dia ny safidy ary ny safidy hafa amin'ny biby an-trano. Eny, na izany aza, manana biby fiompy manokana ao an-tranonao ianao. Saingy tena mahasalama tokoa ve ny reptile ho an'ny ankizy miaraka amin'ny ankizy sa tsia?
Moa ve ny biby mandady toy ny biby fiompy ho an'ny ankizy?
Mahagaga fa mahavariana antsika ny sokatra na ny karazana amboadia samihafa, angamba satria mampahatsiahy antsika ireo fotoana lavitr'izany.
Ankoatr'izany, samy hafa tanteraka amin'ny maha-izy azy izy ireo, mifanehatra amin'ny mifanohitra amin'ny biby malaza ary mahavariana ihany koa.
Eny, biby mahavariana mahavariana ny biby mandady. Fa mety ho biby an-trano? Ary ho an'ny ankizy?
Tokony hividy reptile ve isika?
Alohan'ny hiheveranao ny hividy reptile, toy ny tanalahy iray na gecko iray, tokony hahafantatra zavatra sasany ianao.
Voalohany, ny reptile dia tsy mavitrika amin'ny natiora ary manahirana antsika. Raha tsy tianao ny mankafy ny fijerin'ny reptilia mandritra ny fotoana maharitra, dia tsy ho sambatra ianao amin'ny farany. Manjono fotsiny ny biby mandady rehefa misy sakafo. Amin'ny volana fifadian-kanina dia tsara toy ny tsy misy mihitsy.
Ny karazam-borona sasany dia tsy mampandeha iray metatra isan'andro ary raha izany, raha tsy hoe tsy mahita isika. Ny ankizy indrindra, indrindra moa, dia tokony nokosehina haingana niaraka tamin'ny gecko mangatsiaka.
Miaraka amin'ny reptile ianao dia tsy afaka mihetsiketsika, mandeha na mitondra azy. Tsy hahasarika olona amin'ny biby koa ny biby mandady. Tsy mila fotoana sy hery hampianarana an'io trosa io ianao, tsy hianatra mihitsy.
Sary amin'ny seho an-tsompitra - Sarin-tsarin'ny pejy fananganana
Ary koa, ny reptile dia tsy manana mihitsy ny filàna fihenam-bidy na te hikoropaka anao. Tsy mitady ny sainao izy io. Mifanohitra amin'izany, esory hiala ao amin'ny terrarium izy io, henjana ary tsy hianatra mihitsy hoe tsy manao na inona na inona ianao.
Sarobidy ny repta, fa tsy amin'ny fotoan'ny fahazoana mividy. Ny vidin'ny herinaratra amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy alaina ihany koa ny jiro fanafody. Ankoatra izay, tapakila tsara maromaro ny vola am-bola an-jatony, ny akora sy ny sakafo ihany koa dia afaka mitifitra isam-bolana miaraka amin'ny 50 Euro amin'ny boky.
Raha tsy tena mafana fo amin'ny biby mandady ianao ary mahaliana azy indraindray, dia tsy tokony hividy reptile ianao. Ankoatra izany, ny biby mandady isan-karazany dia tsy eo an-tanan'ny ankizy. Na dia tsy mitaraina ny sokatra iray aza rehefa tsy hiditra ao amin'ny efitra fandraisam-bahiny i Hugo, dia tsy ho tia azy io koa izy.